Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan waa waddani geesi ah...
oo mudan in loo dhiso taallo lagu xusuusto
Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu ku dhashay magaalada Baydhabo, halkaas ayuuna ka ahaa ganacsade caan ah ka hor intii aan loo dooran inuu noqdo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ee lagu soo dhisay dalka Kenya muddo hadda laga joogo laba sano iyo siddeed bilood kaddib markii uu cod aqlabiyad badan leh kaga guuleystey ninki ay isugu soo hareen tartanka jagada u hadda hayo.
Waa nin noocee ah Shariif Xasan oo ay dad badani ay barteen kaddib dorashadiisii? Run ahaantii, waa nin dabeecad fiican, lehna aragti siyaasadeed oo qunyar socod ah, taasoo ku xirtay dhammaan shacabka Soomaaliyeed intiisa nabadda jecel, waxaana uu qayb weyn ka noqday kala qaybsanaantii soo kala dhex gashay xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo u badan dagaal oogayaal iyo gacanyarayaashoodi, kuwaas oo ku fekerayay inay dalka gacanta u geliyaan dowlada Ethiopia ee Tigreegu uu hoggaamiyo, si ay u garan danahooda qaaska ah maadaama ay Ethiopia iyo Kenya soo dhiseen, balse iyagoo is lahaa si fudud ayay idinkugu sahlanaan doontaa inaad siyasadda Soomaaliya gacanta ugu dhigtaan maadaama Baarlamanka ay u badan yihin jawaasiistooda ayaa waxaa soo ifbaxay in arrinkaas uusan ahayn sidey moodayeen, maadaama Baarlamaanka ay soo galeen dad yar oo aaminsan qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya ayaa waxaa billowday is marin waa ka aloosmay isla Baarlamaankii dhexdiisa, halkaasoo uu hoggamiye ka noqday Mudane Shariif Xasan.
Wixii markaas ka dambeeyey wuxuu Shariifku hoggaaminayey garabka Baarlamaanka ee aaminsan dal iyo dad xor ah oo Soomaaliya yeelato, kuwaasoo cagta mariyey qowlaysato xildhibaano ah oo u nool inay lacag ay ku qayilaan la siiyo, lagana marsado wixii la doono, ayna horboodayaan dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf iyo xoolodoonka Cali Maxamed Geeddi, kaddib markii ay damceen inay Baarlamaanka marsiistaan mooshin Soomaaliya loogu xalaaleynayo in ciidamo Tigreega ah dalka ku soo galaan, iska hor imaadkaas oo noqday mid taariikhda gala, kaddib markii laad lagala daalay kooxda u adeegta Tigreega.
Baarlamaankii oo laba u kala jabay - koox uu hoggaamiyo Shariifka oo u badan waddaniyiin mayal adag iyo koox ay hoggaminayaan nin dagaal ooge ah in nin xoolo doon ah oo aan dan iyo heelo ka lahayn dadka, dalka iyo diinta.
Shariifka maxaa guul ah oo uu gaarey?
Inuu diido inuu saxiixo in dalka ciidamada safka hore la soo galiyo.
In dowladdu degto meel aan Xamar ahayn isagoo tagay Xamar.
Inuu Sanca heshiis kula galay garabka kale dowladda ee fadhiyey Jowhar.
Inuu reer Baydhabo ka dhaadhiciyo in dowladda Baydhabo la soo dajiyo.
Inuu dowladda kala jabtey dib isugu celiyo oo uu xarun uga dhigo Baydhabo maadaama ay ku ballan fureen raggii warlords-ka ahaa ee Xamar xaaraanta ku haystey.
Inuu samatabixiyey dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf oo Jowhar laheyste ugu noqday dagaal ooge Maxamed Dheere.
Inuu adduunka ka gado in Soomaaliya arrimaheeda ay iyadu xallisato, beesha caalamkana ku taageerto.
Inuu heshiis la galo Maxkamadaha Islaamka ee inta badan dalka ka talin
jirey, uuna tagay Xamar kuna qanciyey inay heshiis wax ku raadiyaan.
In la taageero hannaanka wada hadalka iyo dib u heshiisinta Soomaalida dhexdeeda.
Inuu xarun ka dhigtay Xamar oo ay nabadgalyo taam ah ka jirtay waqtigii ay maxkamadaha awoodda lahaayeen.
In beesha caalamka uu ku qanciyey in Soomaaliya aysan u baahnayn in la keeno ciidamo safka hore ah maadaama ay dano iyo cadawtinimo fog naga dhexeyso, isagoo yiri "dal iyo dad bay naga haystaan sidee ciideena loogu daraa".
Inuu ka dhadhiciyey beesha caalamka inay ka joojiso mushaarka micna darrada ah ee la siiyo xildhibaannada u nool inay qayilaan, dalkoodana cadaw hoos geeyan ee aan damiirka laheyn.
Inuu ku guuleystey la tashiga dadka aqoonta leh ee Soomaaliyeed, taasoo ku kasbday magacyo qaddarin ah.
Shariif Xasan ayaa waxa ay dadka ku tilmaamaan hoggaamiye qunyar socod ah oo la tashta dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. Haddaba bal aan eegno sababta xilka looga qaaday.
Inuu ka hor yimid u deegidda danaha Tigreega.
Inuu ka hor yimid u adeegidda danaha warlords-ka.
Inuu ka hor yimid lunsashada dhaqaalaha dalka uu ka helo wadammada deeqda bixiya.
Inuu ka hor yimid inuu ku tunto sharciga u degsan dalka.
Inuu ka hor yimid damaca keliyetalinimo ee dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf oo ku dhisan sharci darro iyo wadaniyad daro.
Inuu ka hor yimid heshiis inaan lala galin dadka Soomaaliyeed.
Inuu ka hor yimid u adeegidda Tigreega iyo Kenyanka ku shaqeeya laaluushka.
Inuu ka hor yimid ka aamusnaanta ciidanka dalkeena qabsaday ee Tigreega iyo dabadhilifkooda.
Inuu diido in xukunka degdegga dalka lagu soo rogo iyadoo uu jiro Barlamaan iyo xukuumad la soo dhisay wada hadal iyo dib u heshiisiin.
Inuu amray in ciidamada Ethiopia ee Tigrega iyo calooshood u shaqeystayaasha dalka ka baxaan ama xoog looga saaro.
Waxay dad badani la yaabeen sida ay qowleysatada Tigreega u adeegta ee
xaruntoodu tahay Baydhabo iskugu raaceen fashil ku yimaada dowladooda taagta daran ee aan shacabka Soomaaliyeed ee wadaniga ah aan ka heysanin kalsoonida marka laga reebo kuwo lagu qalday qabiil aan jirin.
Waxaa farxad ah in waddadii fashilka ay cagta saareen, taas oo fursad weyn u ah dadka Soomaaliyeed maadaama EU iyo USA iyo Jaamacadda Carabta , Sudan, Ereteria iyo Djibouti Yemen aysan yeeli doonin in xilka laga qaado hoggaamiye qiimo leh oo la soo doortay.
Waxay dad badani is weydiinayaan sida ay isku qabaneyso xukun dag dag ah oo dalkii lagu soo rogay, taas oo ay macnaheedu yahay in dagaal
ooge Cabdullaahi Yuusuf keliya awood u leeyahay in wuxuu doono uu sameeyo muddo 3 bilood ah maadaama ay awoodda oo dhan gacantisa ay geliyeen kuwa maantey ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen hoggaamiyaha saciimka waddaniga ah ee lagu maagay maxaa dalkaada cadow ugu gacan galin weyday.? Su�aasha jawaabta u baahan waxaa weeye waddan xukun degdeg ah uu saaran yahay sidee Baarlaman uga shaqeyn karaa maadaama dagaal ooge Cabdullaahi Yuusuf 3 bilood ay hadda u bilaabatey inuu sameeyo waxa u rabo?
Waxaan filayaa inaysanba raggani aqoon u lahayn sharciga mise aysan kala gareynin waxay ku dhawaaqayaan mar kasta iyagoo toddobaadkan gudihiisa sameeyey laba arrin oo ka hor imaanaysa sharciga oo ah soo rogista xukunka degdegga ah iyo xil ka dhigista ninkii Tigreega ka soo horjeeday.
Waxaa run ah inaysan xor ahayn dadka Baydhabo fadhiya ee ku shirsan
baqaarka masagada ee ADC.
Mudane Gudoomiye Shariif Xasan waxaan kuugu bishaareyneynaa in maanta magac iyo qiimo aad adiga ka leedahay kuwa u adeega Tigreega ee doonaya inay gumeeyaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed, sidaa daraadeed waxaa sharaf kuu ah qof walbana kuu og yahay inaad diiday adiga iyo ragga saaxiibada ah ee kula fikirka ah in Tigree dalka haysta ka aamustaan.
Waxaan jeclahay inaan dunida u qiro inaadan u baahneyn inaad hoggaamiye u noqoto qoom daciif ah oo aan karti iyo ragganimo u lahayn inay gutaan waajibkooda, balse ka doortay lacag iyo inay addoon u noqdaan waddanka adduunka ugu faqiirsan ee Ethiopia.
Waxaan hubaa in taariikh qormeysa ay tahay, ayna dad badani ka geli doonaan baal madow, kuwaasoo noqon doono kuwa laga faano lagana sheekeeyo mustaqbalka, waayo waqtigu wuu is beddelaa, tariikhduna waxay noqotaa dhaxal gal. Waxaan maqli jirey hebel wuxuu ahaa pro Talyaani, hebelna pro Ingiris, hadda waxaa so baxday oo aan barannay kuwaan waa jawaasiis Tigree iyo Amhaaro iyo Kikuyu. Waxaan Allah ka baryayaa inuusan naga dhigin kuwaas taariikhda madow leh ee baday dalkeenii xorta ahaa in Tigree lagu marti sooro. Tusaale aniga awowgey Cabdi Yuusuf Calijaah wuxuu ahaa SYL, naftiisana waxa uu ku waayey dagalkii Dhagaxtuur ee 5 oktobar 1949 ee
ka dhacay magalada Muqdisho.
Waxaa sharaf ah inaan maqlo awoowgay inuu ahaa halgamaa naftiisa u hurey xorreynta dalkiisa xilligii gumeysiga, balse maantey aan u jeedo dad darajo iyo aqoon iyo canshurtii dalka lagu soo barbaariyey inay gumeysi Tigree dabada u lulayaan, taasoo ah midda maanta qof walbo oo Soomaali ah uusan liqi karin in dalkeenii quruxda iyo qiimaha lahaa ay iibsadeen qabqablayaal aan damiir lahayn welina sacab loo tumayo, welina dad Soomaali ku sheeg ah ay u mashxaradayaan gumeystaha iyagoo cadaw ka dhiganaya dad
Soomaaliyeed oo kula diin iyo af iyo dhaqan iyo midabba leh.
Mudane Guddoomiye Shariif Xasan waxaan kugu dhiirrigelinayaa inaad u nixin, kana soo dabcin mowqifka aad qaadatey ee ahaa inaad diiday u gurbaantunka gumeysiga kuwa u adeega ee aan xorta ahayn, waqti badan waa haysataa maadaama aad tahay nin dhalinyaro ah, halganka ka xoreynta gumeysiga iyo adoomada u adeega ka sii wad meeshaas, waadna guuleysan doontaa, hana ka qoomameyn ka sii mid ahaansho qoom aan damiir lahayn.
Waxaan xubnaha Baarlamaanka ee aaminsanaa fikirka uu qabay Shariifka ka codsanayaa inay si degdeg ah u caddeeyan mowqifkooda siyaasadeed, ayna
is casilaan si degdeg ah maadaama aysan raali ka noqon karin u adeegid Tigree.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in la taageero xooggaga iska caabbinta Tigreega ee dalkeena haysta, lana muujiyo isku xirnaan iyo waddaniyad qiiro leh, taasoo ay tahay an naf iyo maal u hurno sidii dalkeena uga xoreyn lahayn dagaal oogayaal addoon u ah Tigreega iyo Tigreega laftiisa.